I-Gemini kunye neLibra-Ukuhambelana kwiSini, uthando kunye noBomi - Gemini
Gemini kunye neLibra
Ukuhambelana kweGemini kunye neLibra kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
IGemini kunye neLibraUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
I-Gemini kunye neLibra zombini zikhokelwa yinto yoMoya kwaye oku kufuneka kubanike isiqalo esihle soqhagamshelwano lwabo lwengqondo kunye nokuqonda ngomlomo. Xa kuziwa kwisondo, oku kukudibanisa, kuba bobabini baya kukhululeka ukunxibelelana nantoni na ebakhathazayo okanye eyanelisayo. I-ego ye-Fragile yeLibra inokuphakanyiswa ngumtsalane weGemini kunye nendlela yokwabelana ngesondo. Babonakala beyazi indlela yokwenza yonke into incinci kwaye oku kuya kunceda iqabane labo leLibra livule kwaye babelane ngeemvakalelo zabo ngesondo, nabo. Xa iqabane likaGemini libona indlela iLibra enokuthobeka ngayo, nangona bebonakala bechubekile kwaye bebanda, abayi kuba nanto yakwenza ngaphandle kokwabelana ngeemvakalelo ngokunjalo.
Injongo ephambili kubomi babo bezesondo, enyanisweni, ukulungelelanisa le mvakalelo. Iponti luphawu olulawulwa yiVenus, ngokwesondo, inkanuko kunye nokuhenda, ngelixa iGemini ilawulwa yiMercury, ingenabulumko ngokwesondo okanye ngokweemvakalelo. Isiseko sobomi besondo obuhle phakathi kwabo kukufuna ukwazi, kuba uLibra uhlala enomdla malunga neqabane labo, njengokuba uGemini enomdla malunga nayo yonke into. Nangona i-Libra isenokungabi nazigqibo, uGemini akayi kuba nengxaki yokucinga ngendlela eyahlukileyo kunye nokufumana iindlela ezintsha, amagama kunye nohambo lokunonga ukudibana kwabo ngokwesondo.
IGemini kunye neLibraThembela
Xa iLibra ithatha isigqibo sokuba nomntu, nokuba kusemva kwedabi elide, elinzima langaphakathi, mhlawumbi baya kukholelwa kumazwi abo nakwizenzo zabo. Xa bekhetha iqabane, bakhetha ngenxa yesimo sabo kunye nesimo sabo esithe ngqo. I-Libra ayinaso isizathu sokungabaza isigwebo sabo kwaye mhlawumbi baya kukholelwa i-Gemini yabo kuzo zonke iimeko, ngaphandle kwaxa ukunganyaniseki kwabo kubonakala kakhulu. Ukubuyisela, iGemini iya kuhlonipha imfuno yeLibra yokudlala ngothando ukuze yamkelwe kwaye ithandwa ngabanye abantu. Abazukuyifumana nje le nto isoyikisayo, kodwa baya konwabela isiphumo sokuziphatha - inkululeko yabo.
IGemini kunye neLibraUnxibelelwano kunye nengqondo
Iqabane leGemini linomdla kakhulu kwaye iLibra inotyekelo lokuthatha izinto ezininzi ezithethwa liqabane labo njengesithuko sobuqu. Nangona iGemini iya kuthi, kwiimeko ezininzi, ilandele nje ubume bayo obunengqiqo kwaye igqabaze ngezinto kuba nje ifuna ukuthetha, kuya kuba nzima kwiLibra ukoyisa ezinye zezinto abanokuzithetha. Uphawu lweLibra lunovakalelo kakhulu kulo naluphi na uhlobo lokuthanda ukwenza okanye ukugxekwa kwaye uya kukuqonda nokuba uGemini engazi ukuba iqabane labo licinga ntoni. Ngubani onokutsho ukuba yeyiphi phakathi kwabo echanekileyo?
Ekubeni kungekho bantu babini banokuvumelana kuyo yonke into ngalo lonke ixesha ngamnye wabo evula umlomo ukuze athethe, iGemini neLibra zinokuba nonxibelelwano olubuhlungu kakhulu nolunzima ngenxa yokungabikho kokunyamezelana. Iqabane likaGemini likhetha ukuba yimfama kunokuba lamkele ukuba linengxaki yokunyamezelana, kodwa inyaniso kukuba banokuba ngqongqo xa kufikwa kumsebenzi wengqondo yomntu kunye nezimvo zabo. ILibra kwiimeko ezininzi zenzakaliswe ngokwaneleyo luxinzelelo kubuntu babo obuveliswe kwintsapho yabo yokuqala, ngoko baya kuba nempendulo embi kakhulu kule ndlela yokuziphatha nokuba iGemini yayingathethi nto iphosakeleyo.
Umbandela ophambili apha ukwisibakala sokuba uGemini uphilela ukufunda nokufundisa oko akufundileyo. Bahlala bezibonakalisa njengomntu owazi izinto, kwaye uLibra unokubona oku njengemfuno yabo yokubonisa ukulawulwa kwabo kwengqondo. Nangona oku akuyonjongo yabo kwiimeko ezininzi, ngamanye amaxesha isivakalisi esinye esithe uGemini sinokuba yinto eve ibuhlungu kwiLibra kwiminyaka ezayo. ILibra inokufunda kumfundisi-ntsapho, kumntu obonakalise ukubaluleka kwakhe, kodwa hayi kwiqabane labo abaziyo-konke.
IGemini kunye neLibraIimvakalelo
Indlela iimvakalelo zikaLibra ezikhula ngayo yinto efanelekileyo ngokwenene kwiGemini. Babonakala ngathi bayangqamanisa ngelixa iqabane laseLibra likhangela ubunzulu, kwaye iGemini ibhabha ikhangela into entsha efunyenweyo. Abayi kuqaphela njengoko uthando phakathi kwabo luqala ukubonakala, omnye wabo ebaleka kwaye omnye ecinga ngezizathu zokuba kutheni bengafezekanga kunye.
Sinokuthi akukho namnye kubo oneemvakalelo kakhulu, kodwa iLibra ilawulwa yiVenus, ke kukho ikhonkco eliqinileyo kwithafa leemvakalelo apha. Ingxaki ikhula xa bobabini bethetha kakhulu ngeemvakalelo zabo, ngelixa kungekho namnye kubo omayo ukuze azive eneneni. Bangakwazi ukuhlala bebodwa kwaye bekude, ngaphandle kokuba i-Libra ithandana ngokunzulu ngokwaneleyo ukulandela iqabane labo le-Gemini naphi na apho baya khona, kwaye uGemini uwela eluthandweni olunzulu ngokwaneleyo ukuba onke amagama alahlekelwe yintsingiselo.
IGemini kunye neLibraImilinganiselo
Nangona i-Libra iya kuxabisa ukuhambelana kunye nomntu onoxanduva kwaye unokwethenjelwa, i-Gemini iya kwahluka kakhulu kule nto, kunye nemilinganiselo ephikisanayo nayo. I-Gemini iya kuxabisa ubuchule bomntu kunye namandla engqondo kwaye le nto i-Libra ayikwazi ukuphendula ukuba i-Sun yabo iphantsi kwayo. Indawo abadibana ngayo ikuxabiso labo lobukrelekrele, nokuba ikhangeleka ingaqhelekanga kangakanani na. Zizo zombini iimpawu zoMoya kwaye zinika ingqwalasela eninzi kubuntu bengqondo beqabane labo kunye nendlela abacinga ngayo. Basenokufumana indlela yokugezelana ngamagama, bahende baze ekugqibeleni bafumane indlela yokunxibelelana ngayo yonke enye into – ukuba bobabini banenkathalo ngokwaneleyo.
IGemini kunye neLibraImisebenzi ekwabelwana ngayo
I-Libra ngumdlalo wakho oqhelekileyo we-chameleon xa bethandana. Bafuna ukuvavanya ihlabathi leqabane labo, ukuqala ukuya ekupheleni, kwaye baya kubalandela ngovuyo kuyo yonke imisebenzi yabo belindele imbuyekezo efanayo. Nangona kunjalo, oku kunokuphela ngendlela engathandekiyo, ishiya i-Libra iphelelwe amandla kwaye iminqweno inganikwa. UGemini akanandaba nokulandela iqabane labo kuphela kuba efuna ukulandelwa. Bobabini kufuneka bagcine ulindelo lwabo luphantsi kwaye bavumele iqabane labo ukuba libamangalise ngento entsha neyonwabisayo. Baya kunandipha imisebenzi eyahlukahlukeneyo kunye, kodwa ukuze benjenjalo, kufuneka bahlonele imida neminqweno yomnye kwasekuqaleni.
Amaqabane eGemini kunye neLibra abahlali ncam isibini esigqibeleleyo, nangona iimpawu zabo zixhasana. Ukuba iqabane likaLibra linengxaki yokuba lodwa kwaye lizenzela izinto, ayisiyonto iGemini iya kuyiqonda ngokulula. Ngenxa yokunqongophala kwemida yobuqu, abameli beLibra baya kuhlala bevumela amaqabane abo eGemini akhokele indlela ade aphele amandla abo, baziva ngathi kufuneka balale phantsi kwaye bacime ubuchopho babo. Ukuba bafuna ukusebenza kubudlelwane babo kwaye bonwabe, iLibra kufuneka ihloniphe iqabane labo leGemini ngokwaneleyo ukuba livumele ukuba libe ngutitshala wabo, umthandi kunye nomhlobo. Ukubuyisela, iGemini iya kufuneka inakekele iqabane labo leLibra, ihloniphe imida yabo kunye nesidingo sabo sokubambisana.
Iponti I-Scorpio Itaurus Khetha Uphawu Aquarius